Yintoni engatshatanga, eqinisekisiweyo, kunye nokuKhetha ukungena kabini | Martech Zone
Yintoni engatshatanga, eqinisekisiweyo, kunye nokuKhetha ukungena kabini?
NgoLwesihlanu, Septemba 9, 2016 NgoLwesihlanu, Septemba 9, 2016 Douglas Karr
Nokuba loluphi uhlobo lomyalezo wentengiso owenzayo, kuyakufuneka ubonelele ngendlela yomrhumo ukuze ungene kule miyalezo. Uninzi lwamazwe kunye nemigaqo-nkqubo yorhwebo inyanzelisa uhlobo oluthile lwe imigaqo echasene nogaxekile, Ukurekhoda imithombo kunye nemisebenzi yokuziphatha kubalulekile. Nazi iindlela:
Ukhetho olulodwa Le yindlela eqhelekileyo ye-imeyile kunye nomyalezo wokubhaliweyo ongenayo. Umbhalisi ubhalisa kwisiza okanye angeniswe yinkampani kwiqonga lomyalezo. Uncedo lokukhetha ukungena kubunye kube lula, kungafuneki ukuba kubekho unxibelelwano olongezelelweyo. Ukuwa kokhetho olunye kungenxa yokuba ifom yakho inokujoliswa kuyo kwaye iidilesi zomgibe zogaxekile zibhalise ngokuzenzekelayo kuluhlu lwakho. Unokufumana ii-imeyile zakho zivaliwe ezantsi kwendlela. Uncedo lokungena ngokukhethekileyo kukuba abasebenzisi bahlala befuna ubhaliso kodwa abayi kuthatha manyathelo mibini ngeendlela zokungena kabini.
Ukhetho olulodwa kunye nesiQinisekiso Olu lolona hlobo lulungileyo lokufumana umyalezo owodwa wokubhalisela umyalezo kodwa uhlala ungahoywa. Umyalezo owamkelekileyo omnandi oqinisekisa ukuba umrhumeli ukhethe ukungena kwaye ucwangcisa izinto ekulindelwe ukuba zingathunyelwa kangaphi imiyalezo kwaye leliphi ixabiso abaza kuzisa ngalo umbhalisi sisicwangciso esihle.
Ukungena kabini Onke amaqonga emiyalezo afuna ukuba usebenzise le ndlela kuba inciphisa nawuphi na umngcipheko wezikhalazo zogaxekile. Umbhalisi ungene ngefom, ukungenisa, okanye umyalezo obhaliweyo. Oku kulandelwa ngumyalezo kwangoko ukuqinisekisa ukungena. Ukuba yi-imeyile, kuye kufuneke bacofe kwikhonkco kwi-imeyile. Ukuba ngumyalezo obhaliweyo, kufuneka baphendule ngesiqinisekiso sokuba bayangena.
Kukho ubuchwephesha bengqondo obuchaphazela ukungena kabini:
Ukuphinda-phinda kabini kubilise kumgaqo wokuphindaphinda, a umthetho osisiseko weengqondo zentlalo Oko kuthi kwiimeko ezininzi zentlalo, sibuyisela oko sikufumana kwabanye. Qalisa ubudlelwane ngokubonisa ukuhlonipha umntu-kunye nedilesi ye-imeyile akunike yona-kwaye uzibekele ukubuyela kokubuyisela kunye neerhafu ezivulekileyo.
Le infographic evela kwi-Salesforce, I-Psychology ingenza njani ukuba ii-imeyile zakho zibhenele ngakumbi, uhamba ngohlobo ngalunye lokungena kwaye uxoxe ngeendlela zokwenza amava akho e-imeyile ukonyusa ukuzibandakanya kunye nokunciphisa ukungabhalisi kunye neengxelo ze-SPAM. Ikwajongana nokwenza ubuwena kunye nokwenza imigca yesifundo kuthethathethwano olwandileyo.
tags: uqinisekisile ukungenaukungena kabiniukungena okukodwauthini umyalezo wokuqinisekisayintoni ukungena kabiniyintoni ukungena okukodwa